Get up to 50,000 ks Cash vouchers
ကြိုဆိုပါတယ်ချစ်ရေ... MDS Subscriber ဖြစ်ဖို့နီးစပ်လာပါပြီ။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Subscription ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။
(Package မြင့်လေ စိတ်ကြိုက်ဝတ်စုံများများရနိုင်လေ)
(လစဉ်အလိုလျောက်သက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscription ကာလကိုအနည်းဆုံး ၆လသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Premium Collections ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဝတ်အစားများကတော့ Credits ၂ခုကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
လစဉ် ချစ် စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်း (၁) ခု
လစဉ် online ကနေ ချစ်စိတ်ကြိုက် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ဖို့ Credit ၁ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်တို့စိတ်ကြိုက်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်း Credits တွေက သက်တမ်းကုန်တာမရှိလို့ အလောတကြီး အသုံးပြုဖို့မလိုပါဘူးနော်။
ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် 20% လျှော့ဈေး
Online မှာသာမက ဆိုင်များမှာပါ နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် 20% လျှော့ဈေးလေးကိုလည်း ရရှိဦးမှာနော်။
Online ကနေ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုက်တဲ့ ၁ကျပ်တိုင်းအတွက် Point လက်ဆောင်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီး ထို Points တွေကို Cash Vouchers အနေနဲ့လည်းလဲလှယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
လစဉ် ချစ် စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်း (၂) ခု
လစဉ် online ကနေ ချစ်စိတ်ကြိုက် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ဖို့ Credit ၂ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်တို့စိတ်ကြိုက်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်း Credits တွေက သက်တမ်းကုန်တာမရှိလို့ အလောတကြီး အသုံးပြုဖို့မလိုပါဘူးနော်။
လစဉ် ချစ် စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်း (၄) ခု
လစဉ် online ကနေ ချစ်စိတ်ကြိုက် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ဖို့ Credit ၄ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်တို့စိတ်ကြိုက်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်း Credits တွေက သက်တမ်းကုန်တာမရှိလို့ အလောတကြီး အသုံးပြုဖို့မလိုပါဘူးနော်။
MDS Subscriber များအတွက် Point စုဆောင်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်
ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ Subscriber များအနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်းများကို ဝယ်ယူရင်း Points များ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁,၀၀၀ ကျပ် = ၁ Point
MDS Subscribers များရရှိမယ့်ခံစားခွင့်များ
လစဉ်ချစ်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို mdscollections.com.mm မှရရှိခြင်း
Online နှင့် ဆိုင်ခွဲများအားလုံးမှာပါနောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုများအတွက် 20% လျှော့ဈေးရရှိနိုင်ခြင်း
သက်တန်းကုန်ဆုံးရက်မရှိသော Credits များရရှိခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမည်သည့်နေရာကိုမဆို ပို့ဆောင်ခ ၂,၉၉၅ ကျပ်သာ
၄၉,၀၀၀ ကျပ်မှစတင်၍ MDS Subscribers အဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း
ချစ်တို့ရရှိထားတဲ့ Point တွေကို Cash Voucher လေးတွေနဲ့လဲလှယ်ကြမယ်!
၁၀၀ Points ၃,၀၀၀ ကျပ်တန် Cash Voucher
၂၀၀ Points ၁၀,၀၀၀ ကျပ်တန် Cash Voucher
၅၀၀ Points ၅၀,၀၀၀ ကျပ်တန် Cash Voucher
Cash Voucher များကို မည်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်မဆို အထူးလျော့ဈေးများမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်လလျှင် ၄၉,၀၀၀ကျပ်ဖြင့် Subscribe လုပ်မယ်!
MDS Subscribers များအနေဖြင့် လစဉ် ဒီဇိုင်းအသစ် ၆၀၀ကျော်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
MDS Subscription ဆိုတာဘာလဲ?
MDS Subscription ဆိုတာကတော့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ MDS Myanmar ရဲ့အင်္ကျီတွေကိုစိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းထားရမှာဖြစ်ပြီး MDS Subscriber တစ်ယောက်အနေနဲ့ မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမဆိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ Credit များ ရရှိမည့်အပြင် Online မှာသာမက ဆိုင်များမှာပါ ၂၀%လျော့စျေးအထိ ထပ်မံရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
The MDS Subscription isamonthly subscription service that gives you greater savings and flexibility picking your wardrobe's next star piece. Receive credits that can be redeemed for clothes regardless of price, andastorewide 20% discount that you can use online or in Myanmar retail stores.
MDS Subscriber ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ?
MDS Subscription အမျိုးအစား ၃မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ Single - (49,000 ks) ၄၉,၀၀၀ကျပ် တစ်လလျှင်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း ၁ ခု
၂။ Duo - (89,000 ks) ၈၉,၀၀၀ကျပ် တစ်လလျှင်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း ၂ ခု
၃။ Ensemble - (169,000 ks) ၁၆၉,၀၀၀ ကျပ် တစ်လလျှင်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း ၄ ခု
Subscription အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Online မှာသာမက ဆိုင်များတွင်ပါ နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုတိုင်း အတွက် ၂၀%လျှော့စျေးရရှိမှာဖြစ်ပြီး Premium Collections ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းအချို့ကတော့ Credit 2ခု ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Single - (49,000 ks) your choice of 1 itemamonth
Duo - (89,000 ks) your choice of2itemsamonth
Ensemble - (169,000 ks) your choice of4itemsamonth
All tiers come with 20% off any further purchases online and in MDS Myanmar retail stores.
MDS Subscription မှရရှိတဲ့ Credits ဖြင့်ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
MDS Creditsဖြင့် MDS Myanmar Website တွင် In-Stocks ပစ္စည်းများ၊ မကြာခင်တွင်ရောက်ရှိလာမည့် (Arriving Soon) ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးချထားသော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်၍ ဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Premium Collections မှ အချို့ပစ္စည်းများကတော့ Credits ၂ခုအသုံးပြု ၍ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MDS Subscriber ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို Sign Up လုပ်ရမလဲ?
Onlineမှာဆိုရင် ဤနေရာကိုနှိပ်၍ Sign Upလုပ်ပါ။ Sign Up ပြုလုပ် ပြီးနောက်တစ်ပြိုင်နက် Credits နဲ့ ၂၀% လျော့ဈေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
MDS Myanmar ဆိုင်များတွင်လဲ Sign Up ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၂၀% လျော့ဈေးကို Online မှာရော ဆိုင်များမှာပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြား Promotion များဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြု၍မရပါ။
You may also sign up for your MDS Subscription at any MDS Myanmar retail store. Your 20% discount will apply both In-store and Online immediately.
MDS Subscriber များအနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင် Credit(s)အသစ်များ ရပါမလဲ?
MDS Subscriber ဖြစ်ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်၃၀တိုင်းတွင် Credit အသစ်များကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
MDS Subscription Credits ကိုအသုံးမပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲ?
MDS Credits သည် သက်တန်းကုန်ဆုံးခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယခုလတွင်အသုံးမပြုပါက နောက်လတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းမရှိသေးသ၍ Creditsကို အသုံးမပြုသေးပဲ ထားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ချစ်က MDS Subscriber ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ရင်တောင် Credits ကကျန်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit(s) ကို Online မှမဟုတ်ပဲ ဆိုင်ခွဲများမှာ ဝယ်တဲ့အခါရော အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
MDS Credits ကို Online တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့လျှောက် ဝယ်ယူမှုများအတွက် 20% လျှော့ဈေးကိုတော့ Online မှာကော ဆိုင်ခွဲများမှာပါ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ် Subscription ကြေးပေးသွင်းသော ပမာဏ (၄၉,၀၀၀ ကျပ်) ထက်တန်ဖိုးနည်းသော ပစ္စည်းကို Credits နှင့်အသုံးပြုလျှင် ဘာဖြစ်မလဲ?
လစဉ်Subscription ကြေးပေးသွင်းသော ပမာဏ (၄၉,၀၀၀ ကျပ်) ထက် တန်ဖိုးနည်းသော ပစ္စည်းကို Credits နှင့် အသုံးပြုလျှင် Credit ၁ခုအနေနှင့်သာရေတွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပိုငွေပြန်အမ်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
In the event an MDS Subscription credit is redeemed for an item of lower value than your subscription fee (i.e. an item priced below 49,000 ks), the difference will not be refunded. You are however encouraged to redeem your credit(s) for any higher-priced item!
ပစ္စည်းများပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပက်သတ်သော စည်းကမ်းချက်များကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Click here for information on Return Policies and Procedures
Store Credit Voucher များ
1. Store Credit Voucher များ ကို (၁) Sales ချထားသော ပစ္စည်းများ (၂) Subscription လစဉ်ကြေးများ (၃) Subscription ကြောင့် ရရှိတဲ့ ၂၀% လျှော့ဈေး ဖြင့်ဝယ်သော ပစ္စည်း များတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
(၁) Sales items (Sales ချထားသော ပစ္စည်းများဝယ်ခြင်း)
Sales ချထားသော ပစ္စည်းများကို Store Credit Voucher ဖြင့်ဝယ်ယူ အသုံးပြုလို့မရနိုင်ပါ။
(၂) လစဉ် Subscription ကြေးပေးခြင်း
Store Credit Voucher ဖြင့် လစဉ်Subscription ကြေးကိုအစားထိုးပေး၍မရပါ။
(၃) MDS Subscription ကြောင့်ရရှိသော ၂၀% လျှော့ဈေး
Store Credit Voucher ကို Onlineတွင် MDS Subscription ကြောင့်ရရှိသော ၂၀% discount ချထားပြီးသား ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Store Credit Voucher ထက်စျေးနည်းသော ပစ္စည်းကို ဝယ်မည်ဆိုပါက ပိုငွေကို ပြန်အမ်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
2. MDS Subscription ကြောင့်ရရှိသော ၂၀%စျေးချထားပြီးသော ပစ္စည်းကို ပြန်လဲမည်ဆိုပါက ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲ?
MDS Subscription ကြောင့်ရရှိသော ၂၀%စျေးချထားပြီးသော ပစ္စည်းကို ပြန်လဲမည်ဆိုပါက ချစ်ဝယ်ယူသော ပစ္စည်း၏ 20%လျော့ပြီးသော တန်ဖိုးနှင့်တူညီသည့် Store Credit Voucher ကိုသာပြန်လည် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Credit ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းကို return ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် Credit ပြန်ရနိုင်ပါသလား?
MDS Myanmar အနေဖြင့် Credit၁ခုပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Can I use my Store Credit Voucher on (i) Sale Items, (ii) Subscription Fee or (iii) my 20% Discount?
Store Credit Voucher cannot be used on sale items online.
Store Credit Voucher cannot be used for any tier of Subscription Fees.
Store Credit Voucher may be utilised on items bought on 20% discount Online. Do note that if you use the voucher for an item of lower value, the difference will be forfeited.
2. If I return an item bought with my 20% discount, what would be the exchange value?
MDS will issueaStore Credit Voucher equivalent to the price after 20% discount for your next purchase. This applies to In-Store purchases on items bought with 20% discount.
Please note that earrings are not eligible for returns due to hygiene reasons.
MDS Subscriber များအနေဖြင့် အခြား Subscriber ကို Credits လွှဲပေးလို့ရပါသလား?
ချစ်​၏ Credits သည် ချစ်တစ်ဦးတည်းသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အခြား Subscriber ထံလွှဲပေး၍မရနိုင်ပါ။
MDS Subscription အတွက် ဘယ်လိုငွေပေးချေရမလဲ?
၁. Visa, Master, JCB Card အစရှိတဲ့ ကဒ်များနှင့်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
၂. ထိုကဒ်များသည် MDS Subscription အတွက် လစဉ်ငွေဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ Recurring Payment လုပ်ဆောင် နိုင်သော ကဒ်များဖြစ်ရပါမယ်။
၃. ထိုကဒ်များမရှိပါက အခြား Payment များဖြင့် Gift Subscription ဝယ်ယူ၍ မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည်လက်ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ Gift Subscription အား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
၄. အခြား Payment များမှာ- MPU, KBZ pay, CB Pay, OK $, 123 service တို့ဖြစ်ပါတယ်။
We accept all cards including Visa, MasterCard, and JCB.
Cards must be enabled for recurring payments on e-commerce transactions to work for an MDS Subscription.
If you don?t have access toaCredit Card, you may use other payment methods to gift yourself an MDS Gift Subscription. Click here for more information on Gift Subscriptions.
Other payment methods include MPU, KBZ Pay, CB Pay, OK $ and 123 Service.
ချစ်၏ MDS Subscription ကိုပြောင်းလဲ/ ဖျက်သိမ်းလျှင် ဘာဖြစ်မလဲ?
Subscription အဆင့်ကို အဆင့်မြှင့်ခြင်း (သို့) အဆင့်လျှော့ချခြင်းပြုလုပ်ပါက ချစ်၏ Subscription အဆင့်ဟောင်းက ရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ချစ်ရဲ့ အဆင့်အသစ်အတွက် ငွေပေးချေရမှာဖြစ်ပြီး ထိုရက်မှစကာ ရက်၃၀ပြည့်တိုင်းငွေကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်အသုံးမပြုခဲ့သော Creditများအားလုံးကိုချစ်ရဲ့ Subscription အဆင့်အသစ်မှာ ပေါင်းထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Subscription မှ နှုတ်ထွက် / ဖျက်သိမ်းလျှင်
ချစ်ရဲ့ MDS Subscription ကိုပယ်ဖျက်လိုပါက စာရင်းပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀တွင် ရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Subscription သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ နောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်အထိသင့်အတွက် ၂၀% လျှော့ဈေးကတော့ အသုံးပြုလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ရဲ့ Subscription ကိုရပ်တန့်လိုက်ရင်တောင်မှကျန်ရှိနေတဲ့ Credit များက သက်တမ်း ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ် MDS Subscription ကြေးနှင့်ဆက်စပ်ပြီး အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ ရှိပါသလား?
ချစ်တို့ရွေးချယ် အသုံးပြုသော ဘဏ်ပေါ်မူတည်ပြီး MDS Subscription ငွေပေးချေမှုများအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခများ ထပ်တိုးကောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခကြေးငွေများကိုချစ်၏ ဘဏ်မှ ကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဘဏ်အား ဆက်သွယ်စုံစမ်းပေးပါ။
"ချစ်၏ငွေပေးချေမှုစနစ်မှာ မှားယွင်းနေသည်" ဟု ဘာကြောင့်စာရရှိသလဲ?
Credit Card or Debit Card (သို့) ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းမှ လစဉ်ကြေးကိုငြင်းပယ်သောကြောင့် MDS အနေဖြင့် ချစ်၏ ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံမရရှိနိုင်လို့ပါ။ ထိုပြသာနာ ကို ဖြေရှင်းရန် ချစ်၏ MDS အကောင့်ကို Sign In ဝင်ပြီး ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းကိုမြှင့်တင်ပါ (သို့) အသစ်ပြောင်းလဲပေးပါ။ MDS Myanmar ဘက်မှ အချက်အလက်အသစ်ကို အတည်ပြုပြီး ငွေပေးချေမှုအောင်မြင်သည့်အခါ ချစ်ကိုအကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ချစ်ရဲ့ အကောင့်ကို ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် အသစ်ပြောင်းရန် အခက်အခဲရှိနေပါက သက်ဆိုင်ရာဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
MDS was unable to collectapayment because the card issuer or financial institution rejected the monthly charge. To resolve the issue, sign-in to your MDS Subscription account and update or change your payment method. We will verify the new information, and notify you as soon as the payment is successful.
MDS Subscription လစဉ်ကြေးပျက်ကွက်ပါက ဘာဖြစ်မလဲ?
လစဉ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းမအောင်မြင်ပါက ချစ်၏ Subscription နှင့် 20% လျှော့ဈေးကို ချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ၇ရက်အတွင်း Subscription ကြေး နှုတ်ယူခြင်း ကိုပြန်လည် ကြိုးစားပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ပါက ချစ်ရဲ့ Subscription နှင့် လျှော့ဈေး ခံစားခွင့်များကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
In the event ofafailed deduction, your subscription and 20% discount will immediately be temporarily suspended. A re-deduction will be attempted within the next7days, after which your Subscription and discount benefits will resume.
MDS Subscription ငွေလွှဲမှတ်တမ်း (သို့) လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာကို ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ?
ငွေတောင်းခံလွှာမှတ်တမ်းကိုကြည့်လိုပါက My Accounts မှ Billing History ကိုနှိပ်ပါ။ ကြည့်ရှုလိုသည့် နေ့ရက်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ထိုလ၏ငွေတောင်းခံလွှာများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ချစ် Credit Card ရဲ့ Bank statement ထဲမှာ ငွေပေးချေမှု များစွာကိုတွေ့ရသလဲ?
Why am I seeing multiple charges on my Bank statement?
MDS Subscription အတွက် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်သာငွေကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် ငွေပေးချေမှုများကိုတွေ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်း (သို့) MDS Myanmar ရဲ့ Customer Service သို့စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
We will only charge you onceamonth for an MDS Subscription. If you see more charges than you expected, please contact your bank/ financial institution, or MDS Myanmar?s Customer Service, so we can help you investigate.
ဆုလက်ဆောင် Points များ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် Subscriber များမှသာ Point များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁,၀၀၀ ကျပ်သည် Point ၁ခုနှင့်ညီမျှသည် (၁,၀၀၀ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူတိုင်း Point ၁ခုရရှိပါမည်)။
၁၀၀ Points = ၃,၀၀၀ ကျပ်တန် Cash Voucher တစ်စောင်, ၂၀၀ Points = ၁၀,၀၀၀ ကျပ်တန် Cash Voucher တစ်စောင် , ၅၀၀ Points = ၅၀,၀၀၀ကျပ် တန် Cash Voucher တစ်စောင်။
Points တွေကို အခြားသူများထံ လွှဲပြောင်း၍မရပါ၊ Subscription ပျက်ပြယ်သွားပါက Pointများ အသုံးပြုခွင့် မရရှိနိုင်တော့ပါ။
စုထားသော Points ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအား MDS Myanmar သို့ပြန်လည်ပေးသွင်းပါက, Points များအား ပြန်လည် ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Points ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအတွက် Point ထပ်မံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
Points များအားတွက်ချက်ရာတွင် မှာယူသည့် ပစ္စည်း၏မူရင်းစျေးပေါ်တွင် မတွက်ချက်ပဲ အမှန်တကယ် ပေးဆောင်ရသည့် ကျသင့်ငွေပေါ်တွင်သာ တွက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်၊ ပို့ဆောင်ခများကို Points အဖြစ်စုဆောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Points များစုဆောင်းမှုသည် ယခုချိန်တွင် MDS Myanmar ဆိုင်ခွဲများတွင် မရနိုင်သေးပါ။
MDS Myanmar Management အနေဖြင့် Point နှင့်ပတ်သတ်‌သောကိစ္စများအား အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အနည်းဆုံး Subscription ၆လပေးသွင်းရမည်။
၆လမပြည့်ခင် Subscription အား ဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင် မူရင်းဈေးနှင့် ဤလအတွက် Subscription ကြားမှကွာဟနေသောငွေအား ဝယ်ယူသည့်နေ့မှာ ပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Accumulate 1 point for every 1,000ks spent.
100 points = 3,000ks voucher; 200 points = 10,000ks voucher; 500 points = 50,000ks voucher
Points will not be accumulated for portions of an order paid with points.
Points are calculated on the actual amount paid instead of the original price for an order. Points cannot be accumulated delivery charges.
Points accumulation is not applicable in retail stores for now.
MDS Myanmar Management reserves the right to amend Points Rules at any time at our sole discretion.
Minimum subscription of6months